व्रत बस्दा खाइने साबूदाना के साँच्चै शाकाहारी हो त ? कसरी बन्छ साबूदाना ?? यस्तो छ वास्तविकता !
काठमाडौं, ९ माघ । धेरैलाई लाग्न सक्छ कि हामीले प्रसादको रुपमा भगवानलाई चढाउने गरेको र व्रत बस्दा खाने गरेको साबूदाना साकाहारी हो । तर यो एक भ्रम मात्र हो । खासमा साकाहारी भनेर प्रयोग गरिने साबूदाना मांसाहारी हो ।
व्रत बस्दा खाने गरेको साबूदाना साकारहारी हैन् भन्दा विश्वास नलाग्ला तर यो कसरी बन्छ भन्ने बारेमा जानकारी पाउनुभयो भने साकाहारी र मांसाहारी के हो भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ ।
व्रतको दिन अत्याधिक मात्रामा प्रयोग गरिने साबूदाना लड्डु, हलुवा, खिचडी, आदि बाट बनेको हुन्छ । व्रत बसेको बेलामा व्रतालुहरुले फलफुलको भन्दा यस्तै परिकारहरु खान रुचाउँछन् । तर यो कसरी बन्छ भनेर थाहा पाउने हो भने यो न साकाहारी न मांसाहारी छुट्याउन नै गाह्रो हुन्छ ।
यसो हेर्दा साबूदानालाई प्राकृतिक वनस्पति पनि भन्ने गरिन्छ । किनकी यो साग पाकमको रुखमा पाइने चोपबाट बनाइने गरिन्छ । तर बजारमा पाइने साबूदाना बन्ने प्रक्रिया देख्दा यसलाई वनस्पति भन्नु गलत रहेको पाइएको छ । बजारमा पाइने साबूदानको निर्माण प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने मांसाहारी रहेको पाइएको छ । तमिलनाडुको कयौँ ठूला उद्योगहरुमा साबूदाना पाइने गर्छ । तमिलनाडुमा यस्ता कयौँ रुखहरु पाइने गर्छ । त्यसकारण साबूदान पनि धेरै बन्छ ।
कसरी बन्छ त साबूदाना यस्तो छ निर्माण प्रत्रिया
सागोपामाको जरालाई जम्मा गरेर त्यसको चोपबाट साबूदाना बनाइन्छ । सागोपामाको चोपलाई ठूलो ठूलो खाल्डोमा कयौँ दिन सडाएर माथिबाट प्रकाश दिइन्छ । ठूलो ठूलो खाल्डो भएको कारण त्यहाँ किरा र जनावर समेत पस्ने गर्छन् । लामो समयसम्म खाल्डोमा राखिने भएकाले साबूदानामा किरा पर्ने गर्छ ।
त्यसपछि त्यहा रहेको किराहरुलाई नहटाई खुट्टाको सहायताले पामलाई मोल्ने गरिन्छ । यसरी मिचेको सागो पामलाई ठूलो गुदको रुपमा तयार गरिने भएकाले साना दाना तयार गरिन्छ । यसरी तयार हुने साबूदाना व्रत बसेको दिन फलाहारको रुपमा प्रयोग गर्न राम्रो हुन्छ त । व्रत बसेको दिन फलाहार भनेर खाइने साबूदाना साकाहारी भने होइन् । त्यसकारण व्रत बसेको दिन साबूदाना खानुभन्दा फलफुल खानु राम्रो हुन्छ ।
सप्तरीमा प्रहरी इन्काउन्टर : एक जना मारिए !